Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada Ginbot 7 oo Sheegtay In Ay Halgankoodii Siiwadayaan.
Jabhada Ginbot 7 oo Sheegtay In Ay Halgankoodii Siiwadayaan.
Bayaan ay soosaartay Jabhada Ginbot 7 ee ladagaalanta Gumaysiga Itoobiya ayaa lagu cadeeyay mowqafka Jabhada ee ku aadan taliska cusub ee wayaanaha, waxayna Jabhadu kunuux nuuxsatay in mowqafkoodii hore uusan waxba iska badalin.
Jabhada Ginbot 7 ayaa sheegtay in ay siiwadi doonaan halgankoodii laxidhiidhay xoraynta dadka iyo dadlka Axmaarada, waxayna Jabhadu sheegtay in aysan halganka joojin doonin ilaa iyo inta ay ka arkayaa isbadal dhab ah oo kuyimaada siyaasada guracan ee taliska wayaanaha.
Qoraalka Jabhada ayaa lagu sheegay in Jabhadu aysan ladhacsanayn maamulka cusub ee wayaanaha, waxaana qoraalka Jabhada lagu yidhi nin nin badalay ma aha mowqafka Jabhadu balse waa in wax muuqda laga badalo qaab socodka guud ee xukuumada wayaanaha.
Jabhada Ginbot 7 ayaa sheegtay in talada wadanka ay wali hoosta kamaamulaan saraakiil TPLF ah kuwaas oo sida Jabhadu ay sheegtay aan laga sugaynin dimuqraadiyad dhab ah oo kahirgasha wadanka Itoobiya, waxayna Jabhadu ku celisay mowqaf koodii ahaa siiwadida halganka.
Jabhada Ginbot 7 ayaa ah Jabhada ugu wayn ee kadagaalanta woqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Gobolka Axmaarada, waxayna Jabhadu ciidanka wayaanaha kudhufatay dharbaaxooyin waawayn iyagoo hakiyay dhamaan howlihii gumaysiga ee Gobolka Axmaarada.
Xukuumada cusub ee wayaanaha ayaa baryahan waday xodxodasho ay kuhaysay hogaanka Jabhada Ginbot 7 iyaga oo sheegay in ay cafiyeen gudoomiyaha Jabhada Pro, Birhanu Nega, kaas oo ay kusheegeen muwaadin soo halgamay.
Hase yeeshee hogaanka Jabhada ayaa hadalada taliska wayaanaha kasoo yeedhaya kutilmaamay kuwo afka baarkiisa ah, wuxuuna gudoomiyaha Jabhadu sheegay in uusan markii horaba wax dambi ah kaqabin dalkiisa.